Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Jumeirah ao amin'ny Saadiyat Island Resort hanokatra varavarana amin'ny 11 Novambra
Jumeirah ao amin'ny Saadiyat Island Resort dia hanokatra ny varavarany amin'ny 11 Novambra 2018, hitondra rivotra madio sy rendrarendra any amoron'ny Abu Dhabi.
Voahodidin'ny hatsaran-tarehy voajanahary, ity resort amoron-dranomasina ankehitriny ity dia 10 minitra monja avy eo afovoan-tanànan'i Abu Dhabi ary 20 minitra avy amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Abu Dhabi. Any amin'ny nosy mahavariana iray, mitazana ny rano turquoise sy ny dongom-pasika arovana, ny hotely miisa 293 dia manome lanja ny fizahan-tany maharitra ary tsy hisy tavoahangy plastika sy mololo plastika. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Trust Your Water, ny hotely dia hanome vahaolana hamongorana ny filàna tavoahangin-drano plastika tokana ampiasaina. Ny fepetra naroso dia misy tavoahangy plastika maimaimpoana azo ampiasaina indray ho an'ireo vahiny rehetra izay hampirisihina hameno indray ireo tobin-drano manerana ny hotely. Ho fanampin'izay, ny rano voasivana ao an-toerana dia hatolotra ao anaty tavoahangy fitaratra manerana ny toeram-pivarotana.
Ny tale jeneralin'ny Jumeirah ao amin'ny Saadiyat Island Resort, Linda Griffin, dia nilaza hoe: "Ity toerana ity dia toerana tsy misy toa azy - misy zavatra ho an'ny tanora sy ny tanora ao am-pony. Afaka mijery ny filentehan'ny masoandro ny vahiny, mandray ny yoga miposaka amin'ny masoandro na mizaha ny nosy amin'ny voninahiny rehetra amin'ny bisikileta. Misafidiana miala sasatra ao amin'ny iray amin'ireo dobo filomanosana telo tsy manam-petra, mandehandeha manamorona ny morontsiraka madio ary mandritra ny vanim-potoanan'ny fanaovana sokatra dia hisy fotoana manokana mihitsy aza hahitanao ireo sokatra Hawksbill eny amin'ny morontsiraka mirefy 9km. ”
Ny efitranon'i Jumeirah ao amin'ny Saadiyat Island Resort 293 dia misy villa valo misy dobo manokana sy efitrano 70, spa misy efitrano fitsaboana 14 ary Hamman maraokana miaraka amin'ny efitrano mpivady VIP misy fidirana manokana. Ny maritrano ankehitriny no haingoina miaraka amina lohahevitra an-dranomasina izay mitondra fiainana any ivelany. Afaka mankafy ny fahitana mivelatra amin'ny ranomasina na patio lava sy toerana ivelan'ny trano ireo vahiny izay tsy tazana 400 metatra madio sy morontsiraka ary rano milamina. Ny Jumeirah ao amin'ny Saadiyat Island Resort dia toerana iray izay iarahan'ny zavakanto sy kolontsaina kilasy manerantany miaraka amina honko, feso feso sy sokatra - ilay 'vahinin'ny' Nosy Saadiyat tany am-boalohany.